फेरि कपिलबस्तुबाट अायो दुःखद खबर एक किशोरी सम्पर्क विहिन – PathivaraOnline
Home > समाचार > फेरि कपिलबस्तुबाट अायो दुःखद खबर एक किशोरी सम्पर्क विहिन
फेरि कपिलबस्तुबाट अायो दुःखद खबर एक किशोरी सम्पर्क विहिन
तौलिहवा । कपिलवस्तुकी एक किशोरी पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएकी छन् । वाणगंगा नगरपालिका ९ भलवाडकी १६ वर्षीया किशोरी बसन्ता बन्जाडे सम्पर्कविहीन भएकी हुन् ।
यही भदौ २१ गते विद्यालय जान भनेर घरबाट हिँडेकी उनी अझैसम्म घर नफर्किएको अभिभावकको भनाइ छ । आमा सुनिता बन्जाडेले भदौ २२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय पिप्रामा छोरी खोजिदिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिएकी छन् ।
अभिभावकको निवेदनको आधारमा खोजी कार्य तीव्र पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिप्राका इन्सपेक्टर चन्द्र केसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उनको फोटो र हुलियासहित सबैतिर परिपत्र गरेका छौं । खोजतलास तीव्र बनाएका छौं ।’
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सो दिन बसन्ता बाग्लुङ बुर्तिवाङ माइती घर बताउने सीता परियारसँग देखिएकी थिइन् । सीता पनि परिवारको सम्पर्कमा नआएको भन्दै उनका श्रीमान शिव परियारलेसमेत इलाका प्रहरी कार्यालय पिप्रामा निवेदन दिएका छन् ।
इन्सपेक्टर केसीले भने, ‘बसन्ताको आमा सुनिता र सीताको श्रीमान शिवले संयुक्तरुपमा निवेदन दिनु भएको छ । सुनिताले छोरी बसन्ताको फोटो पनि दिनु भएको छ तर, शिवले भने फोटो दिनु भएको छैन, टेलिफोन नम्बर मात्र छाड्नुभएको छ ।’
प्रहरीले अनुसन्धानको लागि कल डिटेल झिकाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अदालतबाट अनुमति पाउनासाथ टेलिकमबाट कल डिटेल झिकाएर थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ,’ इन्सपेक्टर केसीले भने ।
५ मन्त्रीहरु हटाउदै ओली, चर्चित गृहमन्त्री थापा देखि मातृका यादवसम्म – यस्तो छ कारण (नामावली सहित)
फेरि अायो नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डबाट दुःखद खबर, तीजकाे दर खाने हिडेका चेलिबेटीकाे यस्तो अवस्था
कलंकीमा यस्तो भयानक दुर्घटना: ब्रेक फेल भएको ट्रकले ८ सवारी साधनलाई ठक्कर दिएपछि केहिको मृत्यु केहि घाइते!
स्वर्णिम अवसरलाई सफल तुल्याउने ‘विप्लव’को प्रतिबद्धता!
०७७ साल फागुन २२ गते शनिबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूको राशी अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो छ
करिब दुई वर्षपछि सार्वजनिक हुँदा काठमाडौंमा यस्तो देखिए विप्लव!
दिनदिनै सुनको मुल्य यसरी ओरालो लाग्दै…
धमाधम रिहा हुदै विप्लवका नेता–कार्यकर्ता, धर्मेन्द्रलाई श्रीमतिको जिम्मा लगाईयो